DAAWO Sidee lagu Ogaan karaa xuubka Bikrada Siilka iyo in gabadha bigro tahay. - iftineducation.com
DAAWO Sidee lagu Ogaan karaa xuubka Bikrada Siilka iyo in gabadha bigro tahay.
iftineducation.com – Bigrada gabadha waa xibinta ugu muhimsan oo tilmaamaya nabad qabka, xuubka bikrada waxa korka ka dahaara bushimaha yaryar ee siilka . Xuubkaasi oo dillaaca habeenka gabadha la bekra-jebinayo, wuxuu yeeshaa kolka uu dillaaco faraqyo ama raaman, waana la dareemi karaa jiritaanka raamankaasi ilaa laga gaaro dhalmada koowaad kolkaasi oo uu si toos ah u baaba’ayo.
Waxaan markasta ku dadaaleeynaan in aan u soo tabin akhristayaasheena iyo daawadayaasheena sharata mu dan in aan u soo tabino,Hadaa nahay Shabakaga carafaad.com waxa kasta oo nolosha ku ku saabasan anagoo ka eegeyba hadba sida ay xasaasi u kala yihiin u muuruhu, Haddab Dhaqtaraadaan Ayaa noo shar xeysa Xuubka Bigrada iyo hadba sida uu Dunarka ugu kala xoog badan yahay.
Dhakhtarad caafimaad oo tijaabo ay la kulantay ka hadashayna waxay tiri: 16 jir reer miyi ah ayuu ninkeedii oo wadaa iigu keenay goobtayda caafimaadka.
Daawo Diraca muxuu raga u kiciyaa siiba marka ay buuran tahay naagta